Chii chinonzi orthodontist? | Kuumbwa uye kudzidza
Maite Nicuesa | 19/10/2021 23:37 | Jobho Kubuda
Chii chinonzi orthodontist? Kuchengetwa kwemeno ndeimwe yetsika dzinofanirwa kukwidziridzwa kubva paudiki. Iko kushanya kuna chiremba wemazino ndeimwe yemaitiro anotsigira kudzivirira kudzivirira kuenda nekukurumidza kune kunogona kuongororwa. Nekudaro, pane kuchengetwa kunopfuura kungoita kuchenesa mazino kana kuzadza. Kunyemwerera kune chinhu chekushongedza icho chinoenderana nemufananidzo pachawo. Nzira iyo munhu anozviona nayo, manzwiro aanoita kana akatarisa mugirazi, zvinokanganisawo kuzviremekedza kwake. Uye, kune rumwe rutivi, zvinokanganisawo maitiro aunoita kune vamwe.
Chido chekunyemwerera kwakanaka chinogona kuwedzera kurudziro yekutanga kurapwa kunotsigira icho chinangwa. Nyanzvi yemazino Ndiye mumwe wevanonyanya kukoshesa nyanzvi nhasi. Vatengi vazhinji vanoda masevhisi ehunyanzvi ane hunyanzvi mumunda wekurapa mazino. Kumwe kusagadzikana uko munhu anogona kusangana nako zuva nezuva-zuva kunogona kunge kune hukama nechinzvimbo chisina kukodzera chemazino. Izvi ndizvo zvinoitika kana pasina chaicho kupatsanurwa kana kuwanda kunoitika.
1 Nyanzvi mukutarisika kwekunyemwerera kwekunyemwerera
2 Aesthetics uye mashandiro akabatana
Nyanzvi mukutarisika kwekunyemwerera kwekunyemwerera
Hutsva huripo mumunda we orthodontics inopa mhinduro dzemunhu mumwe nemumwe. Nenzira iyi, kuburikidza neyakagadzirirwa uye yakasarudzika maitiro, munhu wacho anogona kusangana neshanduko muhupenyu hwavo. Imwe yemaitiro anokunda mune ino ndima isingaonekwe orthodontics. Izvo zvinofanirwa kunongedzerwa kuti maitiro ekutanga kurapwa haangogadziriswe chete muhudiki. Udiki hungave apo kutarisirwa kwehunyanzvi kunoitika.
Asi, parizvino, kune zvakare vanhu vazhinji avo mukukura vanosarudza kubvunza nyanzvi. Nekudaro, chimwe chezvinogona kunetsa izvo murwere anogona kusangana nazvo ndeyeyesthetic chinhu. Panyaya iyi, zvinofanirwa kutaurwa kuti orthodontics isingaonekwe inopa mibairo yakanaka uye, uyezve, sekuratidzira kwezita rayo, haisi kuoneka kune ziso rakashama. Iwo madhizaini anoshandiswa kuzadzisa basa ravo rakakosha asi anomira kunze kwavo kwese kungwara. Ivo vanoenda zvachose vasingacherechedzwe.
Mukati memunda wekurapa mazino kune mhando dzakasiyana dzemidziyo. Iwo akagadzika anomira kunze, iwo anotakurwa zvachose kune yakatarwa nguva. Izvo zvinobviswa, kune rumwe rutivi, zvinogona kuiswa uye kubviswa zvichienderana nenguva yacho. Nekudaro, munhu iyeye anofanira kuteedzera kuraira kwenyanzvi uye kuipfeke mumaawa akaratidzirwa kuti ibudise zvaunoda. Unyanzvi kuongororwa kunogaro sarudzirwa uye ndizvo zvakaita kurapwa.
Aesthetics uye mashandiro akabatana
Nzvimbo isina kukwana yemeno haisi kungoonekwa chete kubva pakuona kwekuona. Aya mamiriro akakanganisa chiito sezuva nezuva sekutsenga. Kutsenga chikafu zvakadzikama uye zvine hungwaru chinhu chakakosha pakuvandudza kugaya. Nekudaro, chinzvimbo chakaringana chinogona kugadzirisa mafambiro anoita munhu iyeye kukuya chikafu mumuromo wavo.
Naizvozvo, shanduko dzinoitwa kubva pakurapa kwechirevo hachingogadzirise runako chete, asiwo mashandiro. Uye kune rimwe divi, aesthetic factor inoenderanawo neyemweya sphere. Semuenzaniso, inovandudza kuzviremekedza.
Chii chinonzi orthodontist uye nei izvi zvakasarudzika zvichipa yakakwira danho rekushandirwa? Icho chimwe chehunyanzvi hunokosha kwazvo. Uye saka, inopa hunyanzvi hwekuvandudza mikana kune avo vanorota yekudzidzira kushanda mundima iyi mune ramangwana. Iyo nyanzvi inotarisa kuti ndeupi mushonga wakanyanya kunaka kumurwere, iwo unoenderana nezvavanoda uye unopa nyaradzo huru panguva yekuita.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kuumbwa uye kudzidza » Studies » Jobho Kubuda » Chii chinonzi orthodontist?